အလှူခံလိမ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အလှူခံလိမ်
Posted by etone on Oct 17, 2011 in My Dear Diary | 29 comments
ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေ အလှူရေစက် လက်နဲ့ မကွာဟူသောစကားအတိုင်း သဒ္ဓါတရား ထက်သန်ကြသည် ။ အပေးကမ်းရက်ရောကြသည် ။ တစ်ကျပ်တစ်ပြားမှ အစပြု၍ ထမင်းရေချောင်းစီး မောင်းတီးလှူသည်အထိ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခြင့်ချိန်ကာ လှူကြတန်းကြသည်ကို မြင်ရသောအခါ မြန်မာတို့ဧ။် စိတ်ဓါတ်သည် လွန်စွာ ချီးကျူးဖွယ်ကောင်းတော့သည် ။ ဘုရားတည် ၊ ကျောင်းဆောက် ၊ သိမ်ဆောက် ၊ ဘုန်းကြီးသိက္ခာထပ် ၊ ကထိန် အလှူပွဲများတွင်လည်း တပ်အားသ၍ ပါဝင်ကုသိုလ်ပြုကြသည့် အလွန်အလှူတမ်း ၀ါသနာထုံသော မြန်မာလူမျိုးများဖြစ်ကြသည် ။ ထိုသို့သဒ္ဓါတရားထက်သန်သော မြန်မာလူမျိုးများ အကြား သာသနာရေးအမည်ခံ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုများ ရှိသည်မှာ များစွာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်သည် ။ ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများဧ။် စေတနာ ထက်သန်မှုသည် မသမာသူ လိမ်လည်လှည့်ဖျားသူတို့အတွက် အခွင့်ကောင်းဖြစ်သော်ကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို …စေတနာ ထက်သန်မှုအလျှောက် လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်း ခံနေကြရသည် …. ။ ဘာသာရေးလိမ်ညာအလှုခံခြင်းသည် စေတနာထက်သန်သူတို့အတွက် အားနည်းချက်ပင်ဖြစ်သည် ။ ကြုံဖူးမှ ယုံဆိုသလို ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ကာ လုပ်စားမှုတစ်ခု မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရဖူးသည် ။
မနေ့က တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်ဖြစ်သဖြင့် တစ်ပတ်လုံးစာ အကြွေးတင်ထားသည့် အိမ်အလုပ်များ လုပ်ရင်း အလှုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့မိသည် ။ အခန်းရှင်း ၊ အ၀တ်လျှော် ၊ အ၀တ်လှန်း ၊ မီးပူတိုက် စသဖြင့် ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေသည့်အတွက် အိမ်သားများ မည်သူ့ကိုမျှ စကားမပြောဖြစ်ပေ ။ ထိုစဉ် … အိမ်ရှေ့မှ အလှူခံသံကြားရသည် … ။ ကျွန်တော်တို့ xxxx ဆွမ်းလောင်းအသင်းမှ ကြီးမှူး၍ဟု အစချီကာ ….. သဒ္ဓါတပ်အား နည်းများမဆို ကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါ ခင်ဗျာ ဟု အဆုံးပြုပြီး … အလှူလာခံတော့သည် ။ အလှူခံသံကြားသော်လည်း လုပ်လက်စ အလုပ် မပြတ်သဖြင့် ကျွန်မ အလှူငွေ ထမထည့်မိ … သို့သော် … အလှူခံအသံကြားလျှင် မနေနိုင်လောက်အောင် အလှူတန်းဝါသနာထုံသူ ကျွန်မအဖွားက အလှူခံလာလျှင် ထည့်လိုက်ရမှ ကျေနပ်သည့် စိတ်စွဲရှိသဖြင့် … ကိုယ်တိုင်မလှူနိုင်သော်လည်း … အလှူငွေထည့်လိုက်ရန် ညီမလေးဖြစ်သူကို … အော်ပြောလိုက်တော့သည် … ။ ကျွန်မတို့ ညီမနှစ်ယောက်စလုံး အလှူငွေ မထည့်မိပါမူ အဖွားဖြစ်သူဧ။် ပါးစပ်သေနပ်သံ တစ်နေ့လုံးကြားရမည်ဟု သိထားသောကြောင့် … အလှူခံလာတိုင်း ကြိုးစားထည့်သည် … ။ (ကျွန်မဧ။် အဖွားဖြစ်သူသည် … အလှူတန်း အလွန်ရက်ရောသည် တစ်ခါတစ်လေ သူအလှူပြုသော ကိစ္စကြောင့် သား ၊သမီး ၊ မြေး ၊မြစ်များနှင့် အတိုက်အခံဖြစ်ကြရသည် … ။ မိသားစုစားဝတ်နေရေးထက် အလှူတန်းကို ပိုအားသန်သော အဖွားဖြစ်သူ ၊ အလှူတစ်ခုလုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် အိမ်သား တစ်ဦးမဟုတ်တစ်ဦး အမုန်းခံ အတိုက်ခံဖြစ်ကြရသည် … ။ အရှေ့နောက် အကျိုးကြောင်းစီလျှော်အောင် မစဉ်းစား ဟိုအမျိုးက ဘုရားတည်မည်ဟုဆိုကာ လိမ်သွားပြန်သည် ၊ ဒီအမျိုးက အလှူလုပ်မည်ဟုဆိုကာ လိမ်သွားပြန်သည် … အကြိမ်ကြိမ်ခံရသည့်တိုင် အလှူတန်းကို ၀ါသနာထုံလွန်းလှသည် ။ ) အလှူတန်းလုပ်ခြင်းသည် မိမိဧ။် ပိုင်ဆိုင်မှုကို တပါးလူအကျိုးတွက် ပေးဝေခြင်းဖြစ်သဖြင့် စွန်လွှတ်တတ်သော စိတ်ဓါတ် အခြေံရှိသူများသာ ပြုလုပ်ကြသော်လည်း ကျွန်မဧ။် အဖွားဖြစ်သူ အလှူတန်းလုပ်ခြင်းသည် မစဉ်းစားမဆင်ခြင် မိမိပိုင်ဆိုင်သမျှ ဖြုန်းတီးပစ်ခြင်းဟုသာ မြင်မိသည် ။ ထို့ကြောင့် သူပြုသမျှ အလှူတွင် ကျွန်မက အတိုက်အခံ လုပ်မိတော့သည် … ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကအလှူတန်းဝါသနာပါသော်လည်း ၀င်ငွေ၊ထွက်ငွေမျှ၍သာ လှူတတ်ပြီး ၊ သင့်တော်သောနေရာတွင် ၊ စေတနာအလျှောက်သာ လှူတတ်သည် … အလှူခံတိုင်းတော့ စေတနာမရှိပါ ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မကို အဖွားဖြစ်သူက သူများ အလှူလုပ်တာ ပိတ်ပင်သည် ၊ အတိုက်ခံလုပ်သည် ၊ နင်နောင်ဘ၀ ဗြိတ္တာဖြစ်မည် စသည်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ပြန်သည် …. ။ သူမ ဘယ်လို ပြောပြော ကျွန်မကတော့ မကြောက်ပါ …. ကိုယ့်စေတနာ ကိုယ်အကျိုးပေးမည် … လက်ရှိဘ၀ကိုသာ အကောင်းဆုံးနေထိုင်သင့်သည် ဟုသာ အခိုင်မာ ယုံကြည်သေြာေ ကာင့်ပင် ။
ဆက်ပါဦးမည် … ကျွန်မဧ။် အဖွားဖြစ်သူ မြည်တွန်တောက်တီးသံ နားမခံနိုင်အောင် ကြားရနိုင်သည်မို့ ကျွန်မညီမလေးကို အလှူခံ ထည့်ရန်ပြောပြီူး (သူမ အလှူငွေသွားထည့်လား မထည့်လား မသိ)… ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ဆက်လုပ်နေမိသည် ။ ခဏကြာသော် ညီမလေးက ခုန်ပေါက် ပြေးလွှာကာ ကျွန်မအနားလာသည် … “မမရေ … မမ … ဟို အလှူခံက ထူးဆန်းတယ်သိလား ” ဟု ဆိုရှာသည် …. ။ ” အလှူခံက အလှူခံပဲလေ .. ဘာများ ထူးခြားလို့လဲ .. ငါအလုပ်လုပ်နေတယ် အာရုံတွေလာမစားနဲ့ … ဝေးဝေးသွား” လို့ ပြောတော့ …သူမက နားမလည်တဲ့ မျက်လုံးများဖြင့် … တစ်ခုခုကို စဉ်းစားဟန်ပြုပြီး … ” မမကလည်း … ပိန်းပြန်ပြီ …. ထူးခြားတယ်ဆိုတာ အလှူလာခံတာ တစ်ယောက်တည်း … အရင်က ကောင်လေးတွေ အများကြီလေ” လို့ ပြောပြီး အ ထွန့်တက်သည် … ။ ကျွန်မကတော့ သမန်ကာလျှံကာ အမှတ်နဲ့ … ” ဟဲ့ … တစ်အိမ်ကို တစ်ယောက်ပဲ အလှူခံမှာပေါ့ … အများကြီးစုပြုံလာပါ့မလား ….. သွားသွား … ” လို့ဟောက်လိုက်တော့ …. သူက လူကြီးလေသံဖြင့် … ” မမကလည်း ထွက်ပဲ ကြည့်ပါဦး သူ့နောက်မှာလည်း ဘယ်သူ့မှ မပါဘူး …သူ့ရှေ့မှာလည်း ဘယ်သူ့မှ မပါဘူး” ဟုဆိုပြန်သည် … သူ့အပြောကြောင့် ကျွန်မစိတ်ဝင်စား သွားပြီး ….. တိုက်လက်စ မီးပူ ၊ ခလုတ်တောင် မပိတ်တော့ပဲ ပလပ်ပေါက်က ဆွဲဖြုတ်ကာ ပြတင်းပေါက်သို့ သွားကြည့်တော့သည် … ။
ကျွန်မညီမလေးပြောသလိုပင် … ၀တ်ဖြူ စင်ကြယ် (အပေါ်ဖြူအောက်ဖြူ) ၀တ်ထားသော လူတစ်ယောက် ဖိနပ်မပါ ငွေဖလားတစ်လုံးနဲ့ … ညာဘက်လက်က ထီးအပြာကိုကိုင်ကာ တခြား အိမ်များကိုလည်း လျှောက်အလှူခံနေတော့သည် … ။ ခွက်ထဲတွင်လည်း အိမ်ပေါက်စေ့အလှူခံထားသော အလှူငွေများက ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးများဧ။် သဒ္ဓါတရားကို ပြက်ရယ်ပြုသည့်အလား …. ဖလား ပြည့်လုနီးပါးတွေ့ရပြန်သည် … ။ ထိုလူဧ။် မျက်စိတဆုံး အရှေ့အနောက် တောင်မြောက် စုံစေ့အောင် ကြည့်ပါသော်လည်း အလှူခံ တခြား လူများပါမလာပါ … ။ ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူနေသော အလှူခံများကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ၀ါတွင်းကာလတွင်း အလှူခံနေတာ ကျွန်မတွေ့ခဲ့ဖူးသည် ။ ငါးယောက်မှ ဆယ်ယောက် ၊ ဆယ့်ငါးယောက်လောက်ထိရှိသည် … ၀တ်စုံကိုယ်စီ ဖလားကိုယ်စီဖြင့် ဖြစ်သည် …တူညီသည့်ခမောက်လေးများ စောင်းထားသည် ။ တစ်ခါတစ်ရံ လော်စပီကာဖြင့် အော်သည့်လူပါ ပါလာသေးသည် ။ ယခုကဲ့သို့ တကိုယ်တော် အလှူခံခြင်းမျိုး မတွေ့ရချေ … ။ ကျွန်မညီမလေးပြောသလိုဆို …ယခုလူဧ။် တကိုယ်တော် အလှူခံခြင်းသည် ထူးခြားနေသည် … ပို၍ထူးခြားသည်မှာ ယင်းလူဝတ်ထားသော အကျီ င်္ အဖြူတွင် အနီရောင်မှင်ဖြင့် ရေးထွင်ထားသော စာတန်းများသည် … ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် xxxx ၀တ်အသင်းမှ အလှူခံများ ၀တ်သော အကျီင်္ စာသားနဲ့ ချွတ်ဆွပ်တူနေကြောင်းပင် ။
တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက် ရပ်ကွက်ထဲ အလှူလိုက်ခံသော ထူခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်တာကြောင့် မှတ်တမ်းနှင့်တကွ တင်ပြနိုင်ရန် … ညီမဖြစ်သူကို ဖုန်းပေးပြီးနောက်မှ ပြေးကာ ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ခိုင်းသည် … ။ စုံထောက်လုပ်စားလျှင် ငတ်မည့်အရည်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသော ကျွန်မညီမလေးက မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်မှ ဓါတ်ပုံရိုက်မည်ဟု (ညီမလေးပြန်ပြောခြင်းပင်) သွားပြောတော့သည် …. အစစ်မှန်မဟုတ်သော အလှူခံကလည်း …. (ထုံတာကိုး ) သူ့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်မည်ဟု သိသိချင်း … ၀တ်ထားသော ၀တ်ဖြူစင်ကြယ်ကိုပါ အားမနာပဲ ဖ၀ါးနဲ့ တင်ပါး တသားထဲ ကျအောင် ပြေးတော့သည် … ထို့နောက် …နီးရာ ဆိုက်ကား ဂိတ်သို့ပြေးကာ ဆိုက်ကား ငှားပြီး လစ်ပါတော့သည် … .။ထိုမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး အိမ်ပေါ်ထပ်မနေ၍ လှမ်းမြင်နေရသော ကျွန်မတို့ မိသားစု ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်မောခဲ့ရသည် ။ ပျင်းခြောက်ခြောက် တနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းအတွက် ရယ်စရာ ဟာသတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ရတော့သည် ။ မြင်ကွင်းအစုံကို မြင်လိုက်ပါလျှက် အဖွားဖြစ်သူပြောသော စကားကတော့ အလှူခံလည်း လူပဲ ရှက်တတ်တာပေါ့တဲ့ .. ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတော့ … လန့် ပြေးတာနေမှာပေါ့တဲ့လေ … ။ ကျွန်မတို့ ဘယ်လို အတိုက်ခံလုပ်လုပ် ၊ ဘယ်လိုတားတား အဖွားဖြစ်သူကတော့ …အလှူတန်းဝါသနာပါပုံ အရိုးစွဲနေတာကြောင့် … လှေနံဓါးထစ်ဖြစ်နေတုန်းမို့ … ဘယ်သူမှ သူနဲ့ ပြိုင်မပြောပဲ အိမ်ထဲ အလျှိုလျှိုဝင်ခဲ့ကြပါတော့သည်
ကဲ …ရွာသူရွာသားတို့လည်း သဒ္ဓါထက်သန်မှုဟာ တစ်ခါတစ်လေ သူတပါး လိမ်လည် လှည့်ဖြားခြင်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးမိလောက်ပါပြီ ။ ဒီတော့ … မရှိလို့ မလှူ … မလှူလို့ မရှိ ဆိုတာမျိုး ၊ညောင်စေ့လောက်လှူလည်း ညောင်ပင်ကြီးလောက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာမျိုး ဆင်ခြေပေးနေမယ့် အစား … မိမိတို့ဧ။် ချွေးနည်းစာ ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေကို မလိုပဲ အလဟသ ဖြုန်းတီခြင်းနည်းမျိုးဖြစ်တဲ့ … အတုယောင် အလှူခံခြင်းမျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်ပြီးမှ လှူဒါန်းကြပါလို့ နှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတော့သည် … ။ ။
လူတယောက် လှူဘို့ရည်မှန်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံ စည်းစိမ်ဆိုတာ ရိုးရိုးငွေကြေးနဲ့ တန်ဘိုးမတူပါဘူး
အဲဒီမှာ သဒ္ဓါ ထည့်ပေါင်းထားတယ်။
ဒါကြောင့် လှူချင်ပြီဆိုရင် အလှူခံကိုလဲ စီစစ်သင့်ပါတယ်။
အလှူခံဌာနရဲ့ လိုအပ်မှု့ရှိမရှိကိုလဲ စီစစ်ပြီးမှ လိုတဲ့နေရာကိုသာ လှူသင့်ပါတယ်။
မရှိလို့ မလှူ … မလှူလို့ မရှိ ဆိုတဲ့စကားက လူဆင်းရဲတွေ မဖြစ်မနေလှူကြအောင် တွန်းအားပေးနေရာရောက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ငွေကြေးမပြည့်စုံသူများဟာ မိမိရဲ့စားဝတ်နေရေးကို အထိခိုက်ခံပြီး ပိုက်ဆံကုန်တဲ့အလှူမျိုး မလှူသင့်ပါဘူး။ အလှူခံတွေကလဲ ဆင်းရဲသားတွေ ပိုက်ဆံအကုန်ခံလှူမှာကို အားမပေးသင့်ပါဘူး။
ပိုက်ဆံတပြားမှမကုန်ပဲ အကျိုးကြီးမားလှတဲ့ ဒါနကုသိုလ်ပြုစရာတွေ အများကြီးပါ။
ဥပမာ လုပ်အားဒါန၊ ပညာဒါန လိုဟာမျိုးပေါ့။
တုံမမ နဲ့ .ကွာပါ့
ဘာပဲပြောပြော….အလှူခံက ဆိုက်ကားနဲ့ ပါပြေးတယ်ဆိုတော့..
အတုဆိုတာ သိသာ ပါတယ်….
ခုလို…ဓာတ်ပုံဆြာနဲ့ တိုးမှာဆိုးလို့ .
သကောင့်သားလဲ…နောက်လိမ်စားဖို့ တော့ နဲနဲ စဉ်းစားသွားမှာပါ..
ဒီလမ်းခဲကို နောက်ခါ ဘတော့မှ လာတော့ဝူး..
ဒီကလေး .. .ငယ်သေးလို့ … ကြောက်စိတ်နည်းနည်းရှိနေသေးတယ် … ။ ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ တင်ချင်လို့ဟာ .. အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်သွားတယ် … ။နောက်ပိုင်း လက်သွက်အောင် သင်ပေးထားရဦးမယ်
လူကြီးတော်တော်များများက လှူလိုက်ရင် အလှူခံက သူ့ဘာသာ ဘာလုပ်ပစ်ပစ်
ကိုယ့်စေတနာက အဓိကဆိုပြီး လှူတတ်ကြတာကလား
သူမမှန်တာလုပ်ရင် သူငရဲကြီးမှာပဲဆိုပြီး စိတ်ဖြတ်လှူကြတာဆိုတော့….
လက်တွေ့မှာ တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကျတော့ လုံလုံလောက်လောက်မရတော့ဘဲ၊
သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများ အနေဖြင့်
အလှူခံလိမ်များကို ပြင်းထန်စွာ အရေးယူ ၊ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ခန့် 
ပေးပစ်မှသာ ငြိမ်သွားမည် ဟု ထင်မိပါသည်
ကိုပေ အမတ်ဝင်ရွေးလျှင် မဲပေးပါမည်
မမှီ တခါကြုံဖူးတယ်။ ဆိုင်ကနေ နေ့လယ်ဖက် အိမ်ခဏပြန်တော့ လမ်းထဲမှာ အလှုခံတွေတွေ့တယ်။ ၄၊၅၊၆ ယောက်လောက်ရှိတယ် အဖြူအထက်အောက် ၀မ်းဆက်နဲ့။ လက်ထဲမှာ အလှုခံခွင့် စာရွက်တောင်ပါသေး။ သူတို့က ဘယ်ကနေလာပြီး တရားဝင် အလှုလာခံတာပါဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက်စာရွက် ပလပ်စတစ်တောင် လောင်းထားသေးတာ။ သူတို့ ကြည့်ရတာ ကျီးကန်းတောင်းမှောက် မျက်လုံးတွေမို့ သိပ်မသင်ကာချင်ဘူး။ သူတို့ နောက်ကနေ ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေး လမ်းလျှောက်ပြီး လိုက်လာရင်း အကဲခတ်လာတာပေါ့။ အဲ….ဈေး အ၀င်ဝနားလည်း ရောက်ရော တယောက်က ဟေ့ကောင်တွေ ပြန်လှည့် ပြန်လှည့် ဈေးရောက်နေပြီ ပြောပြီး ကုပ်ကုပ်နဲ့ တဖွဲ့လုံး နောက်လှည့် ပြန်ပြေးပါတော့တယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူတို့ပြတဲ့ ထောက်ခံစာက အမှန်မဟုတ်လို့ ဈေးထဲ မ၀င်ရဲတာလေ။ ဈေးခေါင်းက အလှုခံတွေ ဈေးထဲဝင်လာရင် မသင်္ကာတာနဲ့ ခေါ်စစ်တာ လိမ်တဲ့သူဆိုလို့ကတော့ ရဲလက်အပ်တာ နာမည်ကြီး။ လူတွေလည်း လှုတော့လှုချင်တာပေါ့ ကိုယ့်ချွေးနဲစာကို အချောင်နှိုက်တာတော့ ဘယ်ခံချင်ပါ့မလဲ။ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးကို လိမ်တာမှန်းသိလို့ နောက်ဆို ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလှုခံက လွဲရင် လုံးဝကို မလောင်းဘူး။
ဟုတ်တယ် မမှီရေ ..တကယ်ဆို .. လူတိုင်း ဖလားရှိရုံ … သဒ္ဓါတရားနည်းများမဆို .. အော်တတ်ရုံလောက်နဲ့ အလှူခံလုပ်နေတာထက်စာလျှင် ရပ်ကွက်တွင်း အလှူခံခွင့်ဆိုတာမျိုး လုပ်သင့်တယ် … ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကလည်း … တာဝန်သိစိတ်နဲ့ …. မသင်္ကာတာတွေ့လျှင် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဆီပို့သင့်ပါတယ် … ။ ဒါမှပဲ အတုယောင်တွေရဲ့ ဒဏ်က လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရမှာလေ … ။ လူလူချင်း လက်တလုံးခြား လုပ်တာဟာ အဆိုးဆုံးစိတ်ဓါတ်ပါပဲ ။
အလှူခံလိမ်တွေကတော့ မျိုးစုံ ရှိပါ့ဗျာ။
အခုမန္တလေးမှာ သမဏသာရုပ္ပမ ဖြစ်တဲ့ (ရဟန်း၊ သာမဏေများ၊ သီလရှင်များနှင့် မသင့်လျော်သော)
ရဟန်း၊ သာမဏေများ၊ သီလရှင်တွေ၊ အတု ရဟန်း၊ သာမဏေများ၊ သီလရှင်တွေကို တော့ သထဖ (သံဃာတော်များ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့)က သံဃာ့ဥပဒေများနှင့် အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေတာတွေ သီတင်းစာတွေမှာ တွေ့နေရပါပြီ။
လူအလှူခံတွေမှာက တစ်ကယ်တော့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဒေသ အာဏာပိုင်ဆီကနေ အလှူခံခွင့် တောင်းလာခဲ့ရတယ်။ (ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပါရတယ်)။ မရှိရင် အရေးယူ ခံရမယ်။
အတုတွေက ဒါသိတော့ လျှင်သလို တောင်းတယ်။
ဆိုင်တွေထဲမှာ ရထားတွေကားတွေပေါ်မှာ စာအိပ်လေးတွေ ဝေတာ ခေတ်စားနေတယ်ဗျ။
အချို့ အလှူခံတွေက မလှူရင် ပြန်ကောတာတောင် တွေ့ဖူးတယ်။ (သူများတွေကို၊ စိန်သော့ကိုမဟုတ်)။
အမတို့အိမ်က အဒေါ်လည်း တုံတုံ အဖွားနဲ့ အတူတူပဲ.. ကြားထဲက ပြောတဲ့ အမတို့ ညီမတတွေက လူဆိုးတွေကို ဖြစ်လို့…. တခါတခါ လူကြီးများကလည်း ခက်တယ်.. လိမ်တဲ့သူများကလည်း သံသရာမကြောက် လိမ်နိုင်ကြတယ်… ဆိုင်ရာတွေ စီစစ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းမယ်..
အခုတော့ ကုသိုလ် တပဲ ငရဲ တပိသာ ဖြစ်နေရတယ်
အစ်မ poohရေ .. လူကြီးတွေက … လူကြီးဆိုတာနဲ့ .. ငါတကောကောပြီး … သူ့ထက် အသက်ငယ်သူ ဘယ်သူပြောတာမှ လက်မခံတာ အတော်ဆိုးတယ် … ။ ဒိုင်ခံတော့ လှူပါတယ် … (သူမှ မရှာရတာကိုး ) အဲ့ဒါပြောတာ … မရှိတာထက် ၊ မသိတာ ခက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက သိပ်မှန်တာပဲ … ။
မသေမချင်း တစ်သက်လုံး ကြုံရဦးမယ့် ၀တ်ဖြူစင်ကြယ် အလှူခံတွေကို ဒီတစ်ခါပဲ လာအလှူခံတယ် မှတ်နေသလား မပြောတတ်တော့ပါဘူး လေ …
ကိုယ်ကြုံဖူးတဲ့အလူခံတော့ နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ပဲပြောရမလားပဲ အလှူငွေကို ကိုယ်ဒန္ဓါ ရှိသလောက်လှူလို့မရဘူးဆိုပဲ ဘယ်နှစ်သောင်းအထက်ဆိုပြီး လာပြောနေလို့ အံ့တောင်သြမိတယ် တစ်ခါမှမကြားဖူးပေါင်လို့ အဲလောက်ပဲလှူနိုင်တယ်လို့ မယူချင်လဲပြီးတာပဲဆိုမှ ကိုယ်တော်တွေက ယူတော့တယ်လေ မမီပြောသလိုပဲ သူတို့ထောက်ခံစာတွေနဲ့လာတာလေ နောက်ဆိုရင်တော့ လာစမ်းအလှူခံ တွေ့အုံးမယ် ဓါတ်ပုံနဲ့ကိုရိုက်ပြစ်လိုက်ဦးမယ်
အလှူခံတာလား ဓါးပြတိုက်တာလားလို့ မေးပြီး … တံခါး … ဂျိမ်း…. ဆိုပြီး ပိတ်လိုက်
ဒီလို ၀မ်းမန်းရှိုး လုပ်ပြီ
မဟာဝမ်းဗိုက်တော်ကြီးအတွက် အလှူခံတဲ့ သူတွေကိုတော့
ပြတ်ပြတ်သားသား တစ်ခုခု လုပ်သင့်တယ်
ရှိသေးတယ် မြို့ထဲမှာ မျက်စိပုဝါစီးပြီး ဘိုးတော်လိုလိုအကြားအမြင်လိုလို
လုပ်စားနေတဲ့ ဂရု တွေ ကိုလဲ ဖမ်းဖို့သင့်ပြီဗျ..။။။
ဒီလိုလုဎ်ရပ်မျိုးများသည် မည်သည့်နိုင်ဂန်မဆို ရှိပါကြောင်း (သတိထားဘို့ပဲလိုပါသည်)
ကျွန်တော် ကတော့ သဒ္ဓါလို့ လှူပြီးသွားရင်
ကျွန်တော် တို့ အလှူက အထမြောက်သွားပါပြီ။
အလှူခံတဲ့ဘက်က ပြုသမျှကတော့ အလှူခံသူနဲ့ သာဆိုင်တယ်လို့
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် ကိုချောကလက်ရေ .. ဒါပေမယ့် ကိုယ့် အလှူ လိမ်သွားတယ်ဆိုတာကြီးက ဘာစိတ်နဲ့ မှ ဖြေမရတာခက်တယ် ။
လိမ်တာခံရတာမှ ပြောမနေနဲ့တော့ အိတုန်ရေ
အိမ်ပြန်ဖို့ ကားခမှရိလို့ပါဆိုပြီး အ၀တ်အစား သန့်သန့်ဝတ်ပြီး လိုက်တောင်းနေတဲ့ ကောင်မလေးလည်းတွေ့ဘူးတယ်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လာရင်း လမ်းပျောက်နေတယ်ဆိုပြီး ဂမုန်းပွင့်နားမှာ တောင်းတယ်လေ
ဒီနေ့လည်း လမ်းမှားပြန်ပြီလားလို့ မေးခဲ့သေးတယ်…
အဲ့ဒါတွေကတော့ … နေရာအနှံ့ ပြားမှာပါပဲ ယဉ်ငြိမ်းရေ … ။ ဟိုးတခါ 77 ရေးတဲ့ ပို့စ်ထဲကလို ထောင်ထွက်ဆိုပြီး မိုက်ကြေးလိုချင်တဲ့ လူကလည်း ရှိသေးတယ် … အဲ့လို လူနဲ့ ကဏန်းကြီး 77 နဲ့ တွေ့သွားတာပဲ ကောင်းတယ်
အလှူခံ တော်တော်များများကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် မလိုအပ်တဲ့ အပိုချဲ့ကား အလှူခံနေကြတာကများပါတယ်…။ မရှိလို့ မလှူ -မလှူလို့ မရှိ ဆိုတဲ့စကားက ဘုရားဟော လား ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်…။ အဲဒိလို ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လား…။ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မဲဆွယ်စကားလားလို့ပါ…။ အဲဒိလို အလှူခံနေတာ (ဘာသာရေး အလှူခံ ပေါ့နော်) ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတော့ ရှိခဲ့ပုံ မရဘူး …..။ အားပေးခဲ့ပုံမရပါဘူး…။ ဘုရားရှင်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ ညီရဲ့လား ပြန်ဆန်းစစ်ကြဖို့လိုပြီ…။ တို့ဘိုးဘွားတွေက တော့ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပဲဆိုပြီး ဘာမှမစဉ်းစားပဲ ရိုးရာမပျက်ဆက်လုပ်နေကြလို့ကတော့ တိုင်းပြည်နောက်ကျကျန်နေခဲ့ရတာ ဘယ်သူမှသနားမှာမဟုတ်ဘူး…။ ဒီအကြောင်း ပို့စ်ရေးနေပါတယ်…။ အချက်အလက်မပြည့်စုံသေးလို့ မတင်ပဲထားထားတာ….။
အဘနီရေ .. ကျွန်မလေ့လာမိသလောက်တော့ ..အ လှူခံတွေထဲမှာ မြှောက်ပြီး လှူခိုင်းတာ အဆိုးဆုံးပါပဲ … ။ လော်စပီကာကြီးနဲ့ … အိမ်ပေါက်စေ့ အလှူခံတယ် .. ပြီးတော့ဦးဘယ်သူက တော့ အလှူငွေ ဘယ်လောက်ပါ ခင်ဗျာ … ဒေါ်ဘယ်သူကတော့ အလှူငွေဘယ်လောက်ပါ စသဖြင့်အော်တဲ့အခါ … စေတနာအလျှောက် နည်းနည်းပဲထည့်ချင်လည်း … သူအာပြဲကြီးနဲ့အော်မှာ ကြောက်လို့ .. လူကြားကောင်းအောင် အလှူငွေထည့်ရတာလေးတွေလည်း ကြားဖူး ၊ မြင်ဖူးပါတယ် … များများထည့်တဲ့ လူကိုတော့ … နာမည် ကြော်ငြာတာ သုံးလေးခေါက်မကဘူး .. ဆုတွေလည်း ပေးလိုက်တာ တသီကြီး … ။
အဲ့ဒါမြှောက်ပြီး အလှူခံနေတာ … ဒါကို မသိတဲ့ လူတွေက ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ .. အလှူခံထည့်သွားတယ် .. ဟီး
အန်ကယ်ကြီးရေ .. ရွာထဲက ကိုပေါက်ကို လှမ်းခေါ်ဖို့ တွေးပါသေးတယ် ..သို့သော် .. ။
လေးပေါက် ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ အချိန် … အလှူခံကလည်း မြစ်ကြီးနားလောက်ရောက်နေလောက်ပြီ
အီးတုံးညီမရေးက ကြောင်ချစ်တတ်ယား…ကြောင်ကြီ;ကတော့ ညီမရေးဆို အရမ်းကျစ်လယ်….။
ကြောင်ချစ်တတ်တာမှ … လွန်ပါရောလား .. ကြောင်ကိုချစ်လို့ အတူအိပ်တယ် .. ညကျတော့ယောင်ပြီး တက်ဖိမိတာ မနက်ကျတော့ ကြောင်က အသက်ထွက်ရောပဲ
ကြောင်ကြီး သေဝံ့ပါတယ်…။ မမအီးတုံး ညီမယေးကို ရွှေငါးဆူဆူဖြိုးဖြိုးလေးအမှတ်နဲ့ ကြောင်ကြီးတန်ဖိုးထားပါ့မယ်။
etone ရေ ba gyi လည်း မကြာခဏထိဘူးပါတယ်၊ လမ်းစားရိတ်ပြတ်လို့ဆိုတာမကြာခဏပဲ၊ ရပ်ကွက်ထဲ
ကလမ်းတစ်လမ်းရဲ့ကထိန်အလှုဆိုရင်- လှုလိုက်တာ (500ကျပ်) အသံချဲ့စက်နဲ့အော် ပြီးဖြတ်ပိုင်းမှာ ရေး ပေး ခဲ့တာ(300ကျပ်) ကဲ အဲဒါ အိမ်က ကလေးသွားအလှုထည့်ခိုင်းခဲ့တဲ့ အခါတုန်းကအတွေ့အကြုံလေ။
ဒါပေမည့် ba gyi ကအမှတ်သဲခြေမရှိတာလား၊ ဘာလားမသိ လှုတော့လှုဖြစ်နေတာပါပဲ။(သဒ္ဒါ ပေါက် တဲ့အ ခါဆိုရင်လေ) ၊တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်ကပေါ့၊ လမ်းထဲဝါတွင်း နောက်ဆုံးဆွမ်း ပါတ် နေ့မှာပဲဆွမ်းကပ်ကြတော့ ကိုယ်တော် တစ်ပါးဟောသွားတာ-အလှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီး တော့- ———– -၊
ကိုယ်တော်ကတော့ ဆွမ်းအလှု/ကြွေးမွေးတဲ့အလှု မှာ- အဟိတ်တိရစ္ဆာန် တွေကိုကြွေးမွေးလိုက်တဲ့အ လှု အ ကျိုးဟာနှစ် (100) ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်အောင်အကျိုးပေးတယ်တဲ့။
အဲ- ဒုသီလ လို့ခေါ်တဲ့ အကျင့်သီလမရှိတဲ့သူတွေကိုကျွေးမွေးလှုခဲ့ရင်တောင် နှစ်(1000)ချမ်းချမ်း သာသာ နေရဆိုပဲ။
ရဟန်းန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ သူတော်စင်တွေ ကိုကျွေးမွေးလှုခဲ့ရင်- နှစ်ပေါင်း ကပ်ကဗ္ဘာတိုင်အကျိုးပေးဆိုပဲ။
အဲသည်ကိုယ်တော်ဟောဒါ — အကိုးအကားနဲ့ဘယ်ကျမ်းဘယ်စာအရပေါ့လေ ဒါပေမည့် — ၊ အဲသည်အကိုးအကားစဟောတဲ့အချိန် မှာ ba gyi က တစ်ချက်ငိုက်သွားပြီး ၊ အကျိုးပေး တယ်ဆိုမှ မျက်စိကပြန်ကြယ်လာတာကလား၊
သည်တော့ etone လေးရေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သဒ္ဒါပေါက်လို့လှုချင်လာရင်လှုသာလှုလိုက်ပါ၊ လိမ်လို့ပဲဖြစ် ဖြစ်၊ အမှန်အကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လှုတဲ့သူအတွက် တော့တစ်ကယ် သဒ္ဒါပေါက်ရင် အကျိုးမယုတ် နိုင်ဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေကွယ် ။
အဲဒီလို အလှူခံလိမ်တွေ အကြောင်း သိ၊မြင်၊ကြား ရတာ များလာတော့ အလှူခံတွေကို ရှောင်လာမိရင်း ကိုယ့်ကို ကိုယ် သဒ္ဒါတရားခေါင်းပါးနေပြီလား ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာမိတယ် ဒါပေမဲ့လည်း အစစ်မဖြစ်နိုင်မှန်း သိတာမျိုးကြတော့လဲ မထည့်ချင်ပြန်ဘူး
တော်တော် အလှူအတန်း ရက်ရောတဲ့ အဘွားပဲ တော်ကြာ ရွာထဲက လူပျိုသိုး တစ်ယောက်ယောက်ကများ အဘွားဆီ လာပြီး မြေးချောချောလေး တစ်ယောက် အလှူခံချင်လို့ပါဆို ဒွတ်ခပဲ
ဟီးဟီး ကိုအဖျောင်ယူရေ … အဲ့လိုတော့ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမှာ ရှိတဲ့မြေးတွေ သူနဲ့တူလို့ တယောက်မှ လှတပတမပါဘူးလေ